I-Luxury 2BHK Pent House kufuphi ne-Manyata Tech Park - I-Airbnb
I-Luxury 2BHK Pent House kufuphi ne-Manyata Tech Park
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguSam
Iihotele iDaffodil, indawo eyaziwayo eManyata Tech Park inikezela ngendlu ye-Luxury pent embindini wesixeko. Indlu yePent inamagumbi okulala ayi-2 kanokutsho anamagumbi okuhlambela adibeneyo, indawo yokuhlala evulekileyo nenendawo yokutyela, ikhitshi labucala elinazo zonke izinto ezinokusetyenziswa negadi yethala labucala. Thina e-Daffodil Delight sinikezela ngezinto ezinokusetyenziswa ezineenkwenkwezi eziyi-3 ezifana nesidlo sakusasa se-Buffet (i-Rs 100 ngentloko nganye), i-wi-fi ekhawulezayo (yasimahla), Ukucocwa kwezindlu zemihla ngemihla, idesika ye-Frond yeeyure eziyi-24, ivenkile yokutyela yezinto ezininzi, Inkonzo yegumbi phakathi kwabanye.
Siyindlu eneenkwenkwezi eziyi-3 ebizwa ngokuba yiDaffodil Delight ekwindawo ezolileyo, epholileyo nekwizinga eliphezulu, ejonge nje eyona ndlela iphambili yangaphandle, ekude kwiindawo eziphithizelayo ezikumgama onokuhanjwa ngeenyawo ukusuka eManyata Embassy Park. Le ndawo yenziwa ngezinto zangaphakathi zale mihla kunye nefenitshala. Indlu eyakhiwe ngamaplanga enomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu ineebhedi ezinkulu kuwo omabini amagumbi okulala, isofa etofotofo enetafile ephakathi kwigumbi lokuhlala nakwitafile yokutyela izihlalo eziyi-6, ikhitshi labucala elinezinto zokupheka, ifriji negumbi lokuhlamba lale mihla elinamanzi ashushu nabandayo iiyure eziyi-24. Ungabukela imidlalo ye-IPL ezayo kwigumbi lokuhlala elikumgangatho ophezulu kumabonakude ayi-42 ”kwi-High Definition. Indlu ye-pent inegadi entle ye-terrace enezihlalo zangaphandle. Le ndawo inendawo eqhelekileyo yokwamkela iindwendwe kumgangatho osezantsi eneendawo zokuhlala, kunye neenkonzo zokucoca indlu, ivenkile yokutyela engaphakathi endlini phakathi kwezinye izinto ezinokusetyenziswa. SineZiko Lokuzilolonga kunye negumbi lemidlalo elinemidlalo efana neTablet Tennis, iCarrom kunye neChess.
1km - Manyata Embassy Tech Park Front Gate
1Ř - Elements Mall
Imperbal 2Ř - HRBR Layout, Kalyan Nagar
I-25km - Isikhululo Seenqwelo-moya saseBangalore
Ndingafumaneka kule propati ukususela kusasa kude kube ngokuhlwa, sikwanayo nedesika engaphambili yeeyure ezingama-24 kwaye sinabasebenzi abaluncedo kakhulu ukukunceda kuyo yonke into oyifunayo. Abasebenzi bethu nabo bangakuvuyela ukukunceda ekufumaneni iikhabhi kunye nezinye izibonelelo zezothutho.
Ndingafumaneka kule propati ukususela kusasa kude kube ngokuhlwa, sikwanayo nedesika engaphambili yeeyure ezingama-24 kwaye sinabasebenzi abaluncedo kakhulu ukukunceda kuyo yonke i…